Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe iyo Weeraradii Goobaha Shidaalka ee Jeexdin iyo Xeryaha Ciidanka ee Fiiq
Warbixintii Xarunta Dhexe iyo Weeraradii Goobaha Shidaalka ee Jeexdin iyo Xeryaha Ciidanka ee Fiiq
Posted by ONA Admin	/ October 13, 2014
Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa faahfaahin ka bixiyay weeraradii qorshaysanaa oo ay Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia ku qaadeen deegaanka loo yaqaano Jeexdin oo hoostaka Dagmada Shilaabo ee Gobolka Qoraxay.
Warbixinta siduu weerarka u dhacay ayaa tibaaxay in 7/10/14 CWXO ay ku qaadeen xarunta Shidaalka Ogadenia ee Jeexdin halkaasoo ay xukuumada gumaysigu ka waday qorshe ay ugu talagashay in been loogu sheego shirkadaha shidaalka qoda gaar ahaana kuwa laga leeyahay wadanka Shiinaha (china). Weerarkan oo sifiican loo soo qorsheeyay ayaa 3ex jaho lagasoo galay xerada, waxaana fulisay qaybta Danab ee ka howl gasha Gobolka Qoraxay. Cutubyadii weerarka qaaday ayaa goobta ku burburiyay dhismayaal aad ubadan oo ay ku jiraan 2 guri oo dabaq ahaa oo loogu talagalay in ay dagaan shaqaalaha shirkada shilaadka.
Waxaa lagu soo waramayaa in dhulka lalasimay dhamaan gurya badan oo laga dhisayay gudaha xerada kuwaasoo ahaa guryo cusub oo dhismo lagu waday. Sidoo kale taliska qaybta ayaa kusoo waramaya in uu ciidankii gumaysiga ee Jeexdin ku sugnaa uu gaadhay khasaare aad u xoogan iyagoo sida uu sheegay taliska qaybta Danab ay ku garaaceen qoriga loo yaqaano 7 (seven) ama baasuukaha. Waxaana weerarka lagu qaaday xerada Jeexdin laga dareemay guud ahaan Gobolka Qoraxay Gaar ahaan Dagmooyinka Shilaabo iyo Dhoobawayn oo si waafi ah loogaga sheekaysanayo wixii kadhacay Jeexdin.
Waxay sheegayaan ila-wareediyo ka agdhow xafiisyada gumaysiga in uu yaraaday hamigii shirkada shilaalka qoda ee Shiinuhu ay ka lahayd guud ahaan wadanka Ogadenia.
Deegaanka Jeexdin ama Kaaluu waa deegaan uu ceegaago shidaalku wuxuuna dhacaa Galbeedka dagmada Shilaabo iyo Bariga dagmada Dhoobawayn waana deegaanka ay xukuumada wayaanuhu geed dheer iyo ku gaabanba u fuushay sidii ay shirkadaha shidaalka qoda uga gadi lahayd inuu amni yahay goobaha shidaalka si saliida uu Allaah ku manaystay dalkeena ula soo bixi lahayd, waxaase riyadaas beeniyay Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLA) oo aan iyagu ka daalin in ay caalamka u sheegaan in aan hortooda lagu cuni karin khayraadka dabiiciga ah ee Ogadenia.
Dhanka kale 6/10/14 Waxaa magaalada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob laga qabanqaabiyay shir loogu yeedhay shirka xisbiga oo uu soo qabanqaabiyay kooxda Cabdi Ilay iyo Jenenka uu u adeego. Shirkan oo ahaa shir uu doonayay in uu dad badan isugu geeyo goobta, oo halkaa uu ku dhiso gudi fulin oo uu yeesho waxay ugu yeedhaan kilalka 5aad ayaa sidoo kale lagaga takhalusayay xubno kamid ahaa dhidid dhowkii la socday oo ahaa kuwa ku caan baxay dhibaataynta dadka shacabka ah.
Qaybta Hanqadh ee CWXO ee ka howlgala Gobolka Nogob ayaa qorshe u dajiyay siday ufashilin lahaayeen isku-daygaas shacabka lagu marin habaabinayo dadweynaha waxayna ku soo qaadeen weerar dhowr jaho ah oo lagu beegsanayo fadhiisimaha ay dagan yihii ciidamada gumaysiga iyo cawaanta la socota halkaasoo ay ku gaadhsiiyeen khasaare laxaad leh oo aan ku daba jirno faahfaahintiisa in aan soo ururino.
Wararka dhexdooda laga helay ayaa intaas kudaraya in uu istaagay qorshihii shirka laga lahaa oo hal maalin kali ah socday, isla subixiina uu Cabdi ilay u kalahay magaalada Jigjiga suu uga horeeyo inuu gaadho magaalada warka dagaalka ka dhacay goobta, isagoo sheegtay inuu u qabsoomay shirkii uu u aaday magaalada Fiiq.
Inshaa Alaah Guusha Gobanimadoonkaa Leh.